Jawigii Hargeysa Ee Saaka Oo Kale Iyo Gudo-Galkii SNM 31 May 1988 | Berberatoday.com
Hargeysa(Berberatoday.com)-Saaka oo kale oo ay taariikhdu tahay 31-May waxa ay ku beegantahay 31kii May,1988, taas oo ahayd subaxnimadii ciidamadii Mujaahidiinta ahaa ee SNM xalay oo kale oo saq dhexe ahayd ka dhex hilaaceen gudaha Magaalda Hargaysa oo ay ku sugnaayeen ciidamadii Maxamed Siyaad Barre. Si kale haddii loo yidhaahdo waa sannad guuradii sagaal iyo labaatanaad (30aad) ee ka soo wareegtay gudo galkii SNM ee magaalada Hargeysa.
Kun iyo shantii boqol ee aanu ahayn waxay wateen 100 gaadhi, iyada oo tiknikada aanu wadanay aanay tayo badan lahayn, waxaanay dhamaayeen lix gaadhi oo kaliya aniga ayaana masuul ka ahaa, waxaase tiro badanaa gawaadhida kale ee ay shicibku lahaayeen. Socdaal dheer ka dib lixdii makhribnimo waxaanu soo dul istaagnay halkan masalaha oo sheekh Cumar guudkiise sare ah oo qiyaastii 5km inay u jirto aan jeclahay. Halkaas ayey jidgooyo noo dhigeen ay nagu xidhayaan. Jid gooyadaas ay noo dhigeen awgeed ciidankii wuu naga kala biiq biiqay, taasina waxay nagu qaadatay ilaa 12-kii habeenimo. Kaaga darene 12-kii habeenimo dhan kasta way naga soo xidheen oo meel noo banaanayd oo aan garanayaa may jirin, meel laga noqon karaayeyna sawirkeeduba muu muuqan. Iyaga oo sidii u fadhiya ayaanu 12-kii habeeno ka soo dhex maaxanay oo buur sheekh Cumar guudkeeda ah ayaanu soo fuulnay xataa gaadiidkayagi. Ninkii Sheek Cumar la odhan jiray wuxuu aha nin awliyo ah askari ilaahay ah, waayo wadooyin banaan oo uu baneeyey ayaanu ka soo dhaadhacnay